Al-Shabaab oo gubay gaadiid ciidamada dowladda saad u siday | Keydmedia
Al-Shabaab oo gubay gaadiid ciidamada dowladda saad u siday
Al-Shabaab ayaa gaadiid xamuul ah oo ciidamada Dowladda saad u siday ku gubay inta u dhaxeyso Awdheegle iyo No:60 ee gobolka Shabeelaha Hoose.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dagaalamayaal ka tirsan Al-shabab ayaa dab qabad siiyay gaari xamuul ah oo saad u siday ciidamada dowladda oo marayay inta u dhaxeysa Awdheegele iyo deegaanka Lambar 60 ee shabeellaha Hoose.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in ay arkayeen qiica ka baxaya gaadiidka oo gubanaya, waxaana lagu waramayaa in Al-Shabaab inta aysan gaariga dab qabadsiin ka hor dagaal la galeen ciidamada dowladda.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM uu dagaal xooggan ku dhex maray aagga gaariga lagu gubay, waxaana la sheegayaa in dagaalka uu dhaliyay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah, walow aan la ogeyn.
Dhanka kale warar lagu baahiyay Baraha Internet ka ee taageero Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay gaariga ka gubeen ciidamada dowladda, islamarkaana Jab gaarsiiyeen, walow warkaas aan taliska Milateriga Soomaaliya aanu xaqiijin.
Kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jirto dowladda Soomaaliya ayaa mararka qaar weeraro dhabba gal ah ku qaadda fariisimaha ciidamada Dowladda iyo xilliyada ay ku jiraan socdaalka.